ZAVAKANTO : Manohy ny dian’i Jean Fredy ny zanany Jean Franconi ary hanohy ny kanto navelany
Feno 16 taona tamin’ny 16 mey lasa teo ny nahalasanan’i Jean Fredy na i Jean Pain, izay anarana ahalalan’ny mponin’i Fenoarivo-Atsinanana azy ihany koa. 18 mai 2017
Nantsoina hoe Jean Pain koa izy noho ny fitiavany mofo fony fahakely.
Ny alarobia 16 mey 2001 teo amin’ny faha-49 taonany no nodimandry i Jean Fredy. Maro ireo hira nahafantarana azy toy ilay hoe : Ajarantsika roa, Ma bonne étoile, Koragno mangingina, Tambitamby lava, …. I Jean Fredy no nandao ny tany fa ireo kanto navelany kosa tsy afaka am-pon’ny mpankafy azy. Vao mainka mahazo vahana ny fankafizan’ny maro azy manoloana ny fanohizan-janany Jean Franconi ireo kanto navelany.
Jean Franconi na i Jean Fredy Junior dia zanaka lahimatoan’i Jean Fredy. Ankoatra ireo hiran-drainy dia manana ny hirany manokana ihany koa ity mpanakanto ity ary efa namoaka raki-tsary maromaro. Ny taona 2014 no nanomboka nandeha manokana teo amin’ny sehatry ny zavakanto izy. Talohan’izay kosa dia mpitendry tamin’ny tarika tao Analanjirofo sy teto Toamasina ny lehilahy. Manana hirany manokana miisa 12 i Jean Fredy Junior. Ao anatin’izany : Judith, Milamigny, Tsisy pasy, Azafady Mama, … Maro ihany koa ireo hira efa voasoratra fa miandry famoahana azy.
Manana ny ho avy mamirapiratra eo amin’ny sehatry ny kanto i Jean Fredy Junior. Ity mpanakanto ity izay nijoro vavolombelona fa « maro ireo lalana nolalovako. Isaorako an’Andriamanitra ny nanafahany ahy tamin’ny toaka.
Tsy nahasoa ahy ny fisotroan-toaka. Efa maherin’ny 2 taona izay no nialako tanteraka taminy ary tsy mieritreritra ny hiverina intsony. Mifantoka tanteraka amin’ny mozika ny tenako amin’izao fotoana izao ».